Heart Museum: ပရမတ်
***ဒီရက်ပိုင်း ကျွန်တော့ ရင်ထဲမှာ ကိုယ်ချစ်တဲ့ အပြစ်မဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေ အတွက် မချိတင်ကဲဖြစ်ပြီး ဘာမှ ရေးချင်စိတ် မရှိပါ။ ရင်ကိုလာမှန်တဲ့ ကိုရန်အောင့်ရဲ ပရမတ် ဆိုတဲ့ကဗျာလေးကို ကူးယူ ဖော်ပြပါတယ်။ အားလုံး နှစ်သက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဒီကဗျာလေးကို ဖတ်မိအောင် ဖော်ပြပေးတဲ့ မစိုးမြနန္ဒာကိုလည်း ကျေးဇူး အထူးတင်ပါတယ်။***
လာကယ်မယ့် စက်လှေကို စောင့်နေတဲ့
ငါလည်း ငါလုပ်နိုင်တာ ငါလုပ်မယ်
သူလည်း သူလုပ်နိုင်တာ သူလုပ်ပါစေ
တကယ်လုပ်သူဟာ လုပ်စရာရှိတာကိုပဲ လုပ်တယ်
"မုန်တိုင်းဘေးကို အမျိုးသားရေး စိတ်ဓာတ်နဲ့ ကူညီကြပါ..."
ဒေါသထွက်နေရုံ၊ ခံပြင်းနေရုံ၊ မကျေမနပ်ဖြစ်နေရုံ ၀မ်းနည်းပူဆွေးနေရုံနဲ့ မပြီးပါဘူး... မှောင်လှချည်လားလို့ ငြီးတွားအပြစ်တင်နေမယ့်အစား ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လက်ထဲက ဖယောင်းတိုင်လေး တစ်တိုင်စီလောက်ကို ထွန်းညှိ လိုက်ကြရအောင်....
Posted by Heartmuseum at 7:55 AM
Heart yay..., :)
It's GREAT that u put in your blog again as the poem is soooooooooooooo meaningful indeed.
I love all your pictures u choose & attached with poem. It's sooo match with all the words as Ko Yan Aung composed it.
Thanks for let it appear again. Take care of yourself no matter what.
Ummm really hard not to angry at this point heart yayyyy :( :( but I'm learning how to makeapositively respond to my anger. I pray that our frustration and dejection wouldn't be in vain. Peace be with you my friend. :) :) :) :)
ဒီကဗျာလေးကို တစ်ခြားဘလော့တွေမှာတင်ထားတာလည်း ဖတ်ဖူးတယ် အခုလည်း ထပ်ဖတ်သွားတယ် အရမ်းကို ကောင်းတဲ့ အသုံးနှုန်းတွေပါပဲ ဘဘောကျတယ်ဗျာ ဝေမျှတာကျေးဇူးး)
bro heart.. thanks!
တကယ်ကောင်းတဲ့ ကဗျာပါ..။ ကျွန်တော်လည်း သူ့ပို့စ်မှာ ကွန်မန့်ရေးခဲ့ပြီးပါပြီ..။ အခုလို ပြန်လည်ဖော် ပြပေးတဲ့အတွက်လည်း အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်...။ လေးလည်းလေးစားပါတယ်...။